Myanmar's Land - Online University
Professional Diploma In General Business Management
Speed Up Your Success Free Training
Sale Success Training
The Art of Public Speaking Online Training
သင့်ရဲ့ သင်ယူမှု သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ယူပါ
မိမိတို့ Myanmar’s Land Online Academy သည် Myanmar’s Land Institute မှ တည်ထောင်ထားသော အနယ်နယ်အရပ်ရပ်နှင့် ကမ္ဘာအနှံ့မှ သင်ကြားလိုသူများအားလုံး သင်ကြားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားသည့် Online Academy တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ Onlne Learning စနစ်ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီစွာ ထိရောက်မှုရှိရှိ သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Onlne Learning စနစ်ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီစွာ ထိရောက်မှုရှိရှိ သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့ Myanmar’s Land Online Academy သည် Myanmar’s Land Institute မှ တည်ထောင်ထားသော အနယ်နယ်အရပ်ရပ်နှင့် ကမ္ဘာအနှံ့မှ သင်ကြားလိုသူများအားလုံး သင်ကြားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးထားသည့် Online Academy တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
Lynn Thaik Nyunt TV
Myanmar's Land Institute, Taw Win Centre Campus, Room 4004, Taw Win Centre, Third Floor Pyay Road, Yangon.
Phone: 01503172, 09259290274, 095010014
Copyright © 2021 - Myanmar's Land Institute ®. All rights reserved.